Bit By Bit - Mass ပူးပေါင်း - 5.1 နိဒါန်း
ဝီကီ​​ပီးဒီးယားအံ့သြစရာဖြစ်ပါတယ်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအစုလိုက်အပြုံလိုက် ပူးပေါင်း. လူတိုင်းရရှိနိုင်သောစိတ်ကူးစွယ်စုံကျမ်းဖန်တီးခဲ့သည်။ ဝီကီ​​ပီးဒီးယားရဲ့အောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက်အသစ်အသိပညာမဟုတ်ခဲ့, အစားက ပူးပေါင်း. သစ်ပုံစံကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဒစ်ဂျစ်တယ်အသက်, ကံကောင်းထောက်မစွာ, ပူးပေါင်း. အများအပြားအသစ်ပုံစံများနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ယခုကြှနျုပျတို့ကိုမေးသင့်တယ်: ငါတို့သည်တစ်ဦးချင်းစီ-နိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မနိုင်ကြောင်းအဘယျသို့ကြီးမားသောသိပ္ပံနည်းကျပြဿနာတွေ-ပြဿနာများကိုယခုကြှနျုပျတို့အတူတကွကိုင်တွယ်?
ပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့ရဲ့နည်းပညာပိုင်းဝိသေသလက္ခဏာများအပေါ်အခြေခံတဲ့ကြီးမားတဲ့အရေအတွက်အမျိုးအစားသို့သူတို့ကိုစည်းရုံးအများအပြားအစုလိုက်အပြုံလိုက် ပူးပေါင်း. ၏ပုံစံများနှင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရှိပါတယ် (Quinn and Bederson 2011) ။ ဤအခနျးတှငျ, သို့သော်, ငါသူတို့လူမှုရေးသုတေသနအတွက်သုံးနိုင်တယ်ဘယ်လောက်အပျေါအခွခေံအစုလိုက်အပြုံလိုက် ပူးပေါင်း. စီမံကိန်းများခွဲခြားသွားတာပါ။ လူ့တွက်ချက်မှု, ပွင့်လင်းခေါ်ဆိုခများနှင့်ဖြန့်ဝေဒေတာစုဆောင်း (ပုံ 5.1): အထူးသဖြင့်, ငါကစီမံကိန်းများ၏သုံးမျိုးခွဲခြားရန်အထောက်အကူဖြစ်စေသည်ထင်။
ငါနောက်ပိုင်းတွင်အခနျးတှငျအကွီးအသေးစိတျတှငျဤအမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီကိုဖော်ပြရန်ယခုမူကား, ငါ့ကိုအသီးအသီးခေတ္တဖော်ပြရန်ကြကုန်အံ့များအတွက်ပါလိမ့်မယ်။ လူ့တွက်ချက်မှုစီမံကိန်းများကိုထိုကဲ့သို့သောသန်းပုံရိပ်တွေ labeling အဖြစ်လွယ်ကူတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်-ကြီးတွေ-စကေးပြဿနာများအတွက်ထွက်ရှိသောသင့်လျော်ဖြစ်ကြ၏။ ဤအတိတ်အတွက်ဘွဲ့ကြိုသုတေသနလုပ်ငန်းလက်ထောက်အားဖြင့်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြအံ့သောငှါစီမံကိန်းများဖြစ်ကြသည်။ ပံ့ပိုးမှုများကိုအလုပ်တခုကို-related ကျွမ်းကျင်မှုမလိုအပ်ပါဘူး, နှင့်နောက်ဆုံးအထွက်ပုံမှန်အားဖြင့်အပံ့ပိုးမှုများကိုအားလုံး၏ပျမ်းမျှဖြစ်ပါတယ်။ လူသားတစ်ဦးတွက်ချက်မှုစီမံကိနျး၏တစ်ဦးဂန္ဥပမာအားတရာတထောင်စေတနာ့ဝန်ထမ်းနက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်တစ်ဦးသန်းနဂါးငွေ့တန်းခွဲခြားကူညီပေးခဲ့ဘယ်မှာက Galaxy တိရစ္ဆာန်ရုံဖြစ်ပါတယ်။ ပွင့်လင်းခေါ်ဆိုခစီမံကိန်းများကိုထွက်ရှိသောသငျသညျဝတ္ထုနှင့်ရှင်းလင်းစွာမေးခွန်းများကိုရေးဆွဲပြီးမှမျှော်လင့်မထားတဲ့အဖြေကိုရှာကြ၏ဘယ်မှာပြဿနာများအတွက်ကိုက်ညီနေပါတယ်။ ဤအတိတ်ထဲမှာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များတောင်းပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြအံ့သောငှါစီမံကိန်းများဖြစ်ကြသည်။ ပံ့ပိုးမှုများကိုအထူးလုပ်ငန်းတာဝန်-related ကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်သူတွေကိုမှ လာ. , နောက်ဆုံးထွက်ရှိလေ့ပံ့ပိုးမှုများကို၏လူအပေါင်းတို့၏အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပွင့်လင်းခေါ်ဆိုခတစ်ဂန္ထဝင်ဥပမာအားသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်ဟက်ကာများထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရုပ်ရှင်၏ဖောက်သည်များ '' ratings ခန့်မှန်းအသစ် algorithms ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ရှိရာ Netflix နဲ့ဆုဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖြန့်ဝေဒေတာစုဆောင်းစီမံကိန်းများထွက်ရှိသောအကြီးစားဒေတာစုဆောင်းများအတွက်ကိုက်ညီနေပါတယ်။ ဤအတိတ်အတွက်ဘွဲ့ကြိုသုတေသနလုပ်ငန်းလက်ထောက်သို့မဟုတ်စစ်တမ်းသုတေသနလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများကဖျော်ဖြေခဲ့ကြအံ့သောငှါစီမံကိန်းများဖြစ်ကြသည်။ ပံ့ပိုးမှုများကိုပုံမှန်အားဖြင့်သုတေသီများမတည်နေရာမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်သောလူမြိုးမှ လာ. , နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်ပံ့ပိုးမှုများကို၏ရိုးရှင်းစုဆောင်းသည်။ တစ်ဦးဖြန့်ဝေဒေတာစုဆောင်း၏တစ်ဦးဂန္ဥပမာအားရာနဲ့ချီစေတနာ့ဝန်ထမ်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏သားတို့သည်မြင်သောငှက်များအကြောင်းအစီရင်ခံစာများကိုအထောက်အကူပြုသည့်အတွက် eBird ဖြစ်ပါတယ်။
mass ပူးပေါင်းထိုကဲ့သို့သောနက္ခတ္တဗေဒအဖြစ်နယ်ပယ်များတွင်တာရှည်, ကြွယ်ဝသောသမိုင်းရှိပြီး (Marshall, Lintott, and Fletcher 2015) နှင့်ဂေဟဗေဒ (Dickinson, Zuckerberg, and Bonter 2010) , ဒါပေမယ့်လူမှုရေးသုတေသနတွင်သေးဘုံမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်အခြားလယ်ကွက်ထဲကနေအောင်မြင်သောစီမံကိန်းများဖော်ပြခြင်းနှင့်အနည်းငယ် key ကိုစည်းရုံးရေးအခြေခံမူပေးအသုံးပြုပုံငါနှစ်ဦးအရာများကိုသင်တို့အားစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပူးပေါင်းလူမှုရေးသုတေသနအတွက်ကိုညွှန်ပြလိုက်ခြင်းနိုင်ပါသည်။ နှင့်အညီ, ဒုတိယ, အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပူးပေါင်းကိုသုံးသူအသုတေသီများယခင်ကမဖြစ်နိုင်သလိုပဲခဲ့ကွောငျးပြဿနာများကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပူးပေါင်းမကြာခဏပိုက်ဆံကယ်ဖို့တစ်လမ်းအဖြစ်ရာထူးတိုးပေမဲ့, ကထက်အများကြီးပိုပါတယ်။ ငါပြဦးမည်အဖြစ်, အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပူးပေါင်းမယ့်ကျွန်တော်တို့ကိုစျေးနှုန်းချိုသာသုတသေနပွုဖို့ခွင့်ပြုမထားဘူး, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုကောင်းသုတေသနလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
အောက်ကအခနျးတှငျအစုလိုက်အပြုံလိုက် ပူးပေါင်း. ၏သုံးခုအဓိကပုံစံများကိုအသီးအသီးအဘို့ငါတစ်ဦး prototype ဥပမာအားဖော်ပြပါမည်, နောက်ထပ်ဥပမာအတူအရေးကြီးသောနောက်ထပ်မှတ်သရုပျဖျော; နောက်ဆုံးအစုလိုက်အပြုံလိုက် ပူးပေါင်း. ၏ဤပုံစံလူမှုရေးသုတေသနဆိုင်ရာများအတွက်အသုံးပြုစေခြင်းငှါအဘယ်သို့ဖော်ပြရန်။ အခန်းသင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပူးပေါင်းစီမံကိန်းကိုဒီဇိုင်းကိုကူညီနိုငျသောငါးစာမူတွေနဲ့ကောက်ချက်ချလိမ့်မည်။